ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “မိုးတွေလေတွေ လာပါပေါ့”
ဒီမိုး ဒီလေ နဲ့ ဒီလူတွေ ခံရပြန်ပေါ့ တခါ။
တို့ ၉၇ကနေ ၉၉ အာရှ စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တော့ စင်ကာပူ၊ မလေးရှားမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ။
အခု ၂၀၀၇ အမေရိကား စီးပွားပျက်ကပ်ဆိုက်တော့ အမေရိကားမှာ ရောက်နေပြန်ရော။
ကိုယ်သွားတဲ့နေရာ လိုက်နေသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဖာသာသူ နေနေရင် အကောင်းသား၊ ကိုယ်ခေါ်လာသလား ထင်ရတယ်။ :(
2007မှာ ယူအက်စ်စရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်လဲရောက်ရော စီးပွားလဲ ပျက်ရော။ ရှေးခေတ်တုန်းကလို မဲချပြီးသာ လှေပေါ်က ကန်ချခံရမယ်ဆို ကံဆိုးသူ မယ်မွန် ထိပ်ဆုံးကထင်တယ်။
အလုပ်ပြုတ်လောက်အောင်တော့ မဟုတ်ဘူး မျှော်လင့်နေရတာပဲ။
ဘယ်ဘဏ်မှာမှ ပိုက်ဆံစုမထား.. ဘာရှယ်ယာမှဝယ်မထား..မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူတွေ
ဘိုကေလေးတွေ လာပါလို့ ခုံဖိနပ်နဲ့ဆော်"
ဒေသကွာတော့ version နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ထင်ပါ့။:P:P:P
မမိုးချိုသင်း….. ကံကောင်းသူသွားရာ…မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာမျိုးပေါ့။း-)….
သုနှင်းဆီ….. အခုတောမီးတွေလောင်နေတဲ့ အာနိုးတို့ ပြည်နယ်မှာဆိုရင် မယ်မွန်ကြောင့်ဆိုတာ သေချာပြီ။
ပန်ဒိုရာ…. ပူတော့လည်း ပူတာပေါ့လေ။ လူဘဲ။ သို့သော် ပြည်တွင်းက ဒုက္ခတွေနဲ့စာရင် ခြင်ကိုက်သလောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
ပေါက်…. ကောင်းပါပေ့။ အဲသည်လိုဘဲ စိတ်ထားတတ်ရမှာ။
ဆင်ဒန်လား….ကျေးဇူးဘဲ။ ကဆုန်နဲ့ နယုန် ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတုန်းမှာ ဆင်ဒန်လား ကွန်မင့်ကို တွေ့လိုက်တော့ သေချာသွားတယ်။ ပြင်လိုက်ပြီ။ မူရင်းကတော့ ဘိုကေလေးတွေ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဘက်မှာတော့ အပျိုလေးတွေလို့ဘဲ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဆိုခဲ့ကြတယ်။
ကျိတ်ပြီးဆုတောင်းနေတာ..ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကကျွန်တော့်က ၁၀ လစာပေးပြီးဖြုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ :D
ဟီး... ရွာပြန်ပြီး ကွမ်းယာဆိုင် ဆိုင်ခွဲတွေကို ဖရန်ခွိုက် (မရေးတက်ဘူး) ပေးဖွင့်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပဲလုပ်တော့မယ်.. ငှဲငှဲ..ကျွန်တော်ကတော့ကိုပေါလိုလှေမထိုးစားဘူးနော်.. ကွမ်းယာဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဆိုပါတော့..ကိုပေါနဲ့မဒမ်ပေါလည်းကျွန်တော့်လုပ်ငန်းမှာရှယ်ရာထည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.. စောစောကြိုပြောထားနော် ဘူးသီးသီးမှအရီးလာမတော်နဲ့..ဒါပဲ
ဘာလဲ….ကိုရွှေအောင်။ အစုစပ် ရှယ်ယာထည့်ဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး နောက်တော့ ငွေတွေဘုံးပြီး လစ်ပြေးမယ် ကြံသလား။ မရဘူးနော်။ ဒီက အရမ်းစိတ်ကြီးတယ်။ ဆွေခုနစ်ဆက်၊ မျိုးခုနစ်ဆက်တိုင် လိုက်လံချေမှုန်းမယ် ဟင်း…ဟင်း….။ တူရွင်းတောင်ခြေက အညတရ ဓါးသမားလေး ကိုပေါကို အထင်သေးမယ် မကြံနဲ့။
အလကားပြောတာပါဗျာ။ ထည့်စရာ အရင်းအနှီးမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အရင်းမစိုက် လှေထိုးလိုက် ဘို့ ကြံနေတာပေါ့ဗျ။
ရီထချင့်မင့် ပက်ကေ့ဂ်ျ မျှော်ပုံခြင်းကတော့ တူပါ့ဗျား။ ကျနော်လည်း လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်သက်တနှစ်တိုင်းအတွက် တနှစ်ကို တလစာ ပေးပြီး အလုပ်ဖြုတ်ပါစေ ဆုတောင်းနေတာဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း Great minds think alike လို့ ဆိုကြတာ ထင်ပါရဲ့…ဟီးဟီး။
ကိုပေါရေ.. အခုတော့ နေရာတိုင်း ကုမ္မဏီတိုင်းမှာ ပြုတ်ဆော်နံနေတာနော်။ ဟိုနေ့ကမခိုင်ပြောတယ်။ ဒီကုမ္မဏီက အကြီးကြီးတွေကပြောတယ်တဲ့။ အလုပ်က နောက်၂လစာလောက်ပဲရှိတော့တယ်တဲ့။ ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲတဲ့...
ငြိမ်းရေ….. ဘာမှမပူနဲ့။ အကြံကောင်းရှိတယ်။ ကျနော်တော့ ဘွန်းလေး ဘူတာမှာ နေရာဦးထားပြီးပြီ။ ၀ါးပိုးဝါး အဆစ်ပိတ် နှစ်ခုရရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်။ သီချင်းကတော့ မြန်မာသံစဉ်လေးပေါ့။ “သီရိဓမ္မာသောက မဟာရာဇာ…ဗုံ..တုံ..တုံ…..ဗုံ..တုံ..တုံ”။
စိတ်ကူးကြည့်မိတယ်။ ကိုပေါအပါအ၀င် ကိုယ်တို့နေ့တိုင်းဖတ်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ Blogger တွေအရမ်းချမ်းသာပြီး အလုပ်လုပ်စရာ မလိုလောက်အောင် နေရရင်ကောင်းမယ်။ အားလုံးမြန်မာပြည်ပြန်ပြီး စာတွေပဲရေးကြ။ Online ပေါ်မှာတင် မကဘဲ စာအုပ်တွေပါထုတ်ကြပေါ့။ ကိုပေါဆိုရင်တော့ အကြည်တော်တို့ နီကိုရဲတို့ နားထားပဲ။
Butttttttttttttt , စာပေစီစစ်ရေးကိုတော့ မသေချာဘူးနော့။ :)
Your writing '“ကြွေရက်ကယ်စော”' has been copied by this blog without mentioning your blog as reference http://zawphyowai.blogspot.com/2008/11/blog-post_14.html
Wunna...... မှတ်ချက်ဖတ်အပြီး ခေါင်းထိပ်မှာ အာလူးဖုသွားတယ်။ မြောက်ပြီး မျက်နှာကျက်နဲ့ တက်ဆောင့်လို့။ အလုပ်လုပ်စရာမလိုအောင်တော့ ချမ်းသာချင်တယ်။ စာအုပ်တော့ ထုတ်မရောင်းရဲဘူး။ ခွက်ခွက်လန် သွားမှာ စိုးရိမ်လို့။ စာပေကင်ပေတိုင်ကတော့ မပြောပါနဲ့တော့ဗျာ။
Paing Ye…. အခုလို လာရောက် အသိပေးပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းဘဲ ကျနော်သွားဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ အားပါးပါး…ခေါင်းစဉ်လည်း ပြောင်းထားတယ်။ နာမ်စားတွေလည်း နည်းနည်းပြောင်းထားသေးတယ်။ လုပ်ရက်ပါပေ့ကွယ်ပေါ့။ သို့သော် စီးပွားဖြစ်လုပ်စားတာမဟုတ်လို့ တော်သေးရဲ့လို့ ကြံဖန်ပြီး ဖြေသိမ့်လိုက်ပါတယ်။ မဖြေသိမ့်လို့လည်း ကိုယ်ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလေဂျာ။
When I go and read the link given by Paing Ye, I cannot really take it ...the way he edit your post.So disgustinggggggg.....!!!!!!
I copy the thief blogger " zawphyowai " post and share with you all here.
"သြော်….အခုတော့ သူတကယ်ဘဲ သွားရှာပါပြီ။
မှတ်မိသေးသည်။ လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ် ကျနော်တို့အိမ်ကိုသူစရောက်လာစဉ်က ကျနော်ကကျောင်းတက် နေတုန်း။ ကျောင်းက ပရော့ဂျက်ကို စလုပ်နေချိန်။ ကျနော့်ပရော့ဂျက်အတွက် အစစ သူက ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျနော့်ကျောင်းစာများမှာလည်း သူ့အကူအညီသာမပါလျှင် ကျနော်နားလည်ဘို့မလွယ်။
အဲသည်တုန်းက ကျနော်တို့က ရပ်ကွက်ထဲမှာနေကြတော့ အိမ်ကကျင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ သူရောက်လာသည့်အတွက် ကျနော်တို့ အနေမကျုံ့ပါ။ ကျနော်တို့ ဒဏ်ကိုသာ သူကောင်းကောင်းခံရလေတော့သည်။ ကျနော်တို့ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အထိ မအိပ်ဘဲနေလျှင် သူပါ အိပ်စက်ခွင့်မရ။ အရက်မသောက်တတ်သော သူ့ကို ဘေးမှာထားပြီး ကျနော်ဘီယာပုလင်းထောင်တာမျိုး၊ ကော်ဖ်ီသောက်ကြတာမျိုးကတော့ သူ့အဖို့ အဆန်းမဟုတ်တော့။ တခါတလေများ လင်းအားကြီးမှာ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ သူ့ကို နှိုးချင်တတ်သေးသည်။ တခါတလေ….တညလုံး
သူကတော့ တကယ့်ရေခဲတုံး။ ဘာဆိုဘာမှ မပြော။ လုပ်တိုင်းခံသည်။
သည်လိုနှင့် ကျနော်တို့ သူ့အကူအညီမပါလျှင် ကျနော်သည်လောက် ခရီးရောက်မည်မဟုတ်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသော သူငယ်ချင်းများကိုလည်း များသောအားဖြင့် သူကတဆင့်သာ ဆက်သွယ်ရသည်။
သို့သော်….လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်ကစ၍ သူ့ကျန်းမာရေး ချူချာလာသည်။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အရင်ကလို သွက်သွက်လက်လက်မရှိတော့။ တကြိမ်တွင် မနည်းနှိုးယူရသဖြင့် သူသွားတော့မည်လောဟု ကျနော် အကြီးအကျယ် ထိတ်လန့်ရဘူးသည်။
သူ့ကို အိမ်မှ မထုတ်ခင် နောက်ဆုံးအမှတ်တရအဖြစ် သူ၏ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဖြစ်သော Memory stick နှစ်ချောင်း၊ Harddisk နှစ်လုံးနှင့် ကျနော့်ဘာသာ ၀ယ်တပ်ထားသော Video Capture card တို့ကို ကျနော်ဖြုတ်ယူထားလိုက်သည်။
သူ့၏ အသက်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအား “အပနား”ခေါ် ပစ္စည်းအဟောင်းဝယ်သူ၏ လက်ထဲသို့ အပ်လိုက်ပြီးနောက် ကျနော့်နှုတ်မှ နောက်ဆုံးအကြိမ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရေရွတ်လိုက်သည်။
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ရယ်သွားတယ် ကိုပေါရေ…
မနေ့ ကပဲ လင်မယား၂ယောက် အသုံးလျော့ဖို့ တိုင်ပင်နေတာ…
တချို့ ကလဲ အသုံးလျော့ရင် ပိုဆိုးမယ်… အရင်ကအတိုင်း သုံးဆိုပဲ…
ပိတ်ရက်ဆို အိမ်ထဲမှာနေ ချက်ပြုတ်စား၊ ဘယ်မှမသွား၊ အဲကွန်းနဲ့ အိပ်တဲ့ အကျင့်ဖျောက်၊ ၀င်းဒိုးရှောပင်လောက်နဲ့ ရပ်၊ ဟန်ဖုန်းတွေ ခဏခဏမလဲနဲ့ … အင်း…ဒီလောက်ဆို နဲနဲတော့ စုမိမယ်ထင်တယ်… ကောင်းတာကတော့ ဘလော့ဂ်များများရေး… အကုန်အကျသက်သာတယ်… ရုံးမှာရေးရင်တော့ သတိထား… နဂိုကမှ လှုပ်တုတ်တုတ် ပြုတ်သွားရင် အခက်… ထီတော့ပြန်ထိုးမလားလို့ … ပြောနိုင်ဘူးမိုလား…
ဒါထက်. အပျိုလေးတွေ လာတော့ ဘာလို့ ခုံဖိနပ်နဲ့ဆော်တာလဲ
"ZawPhyoWai" has removed that edited version of '“ကြွေရက်ကယ်စော”' post and my comments for him (in his C-box) too. :-)
Blog Police…… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျိုး။ အခုလို စွမ်းစွမ်းတမံ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းအိုးအိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတာကို။း-)
တန်ခူးရေ….. တန်ခူး နောက်ကျနေပြီ။ ကျနော် မနက်ဖြန်ဖွင့်မယ် သုံးသန်းထီ တိုတိုလက်မှတ် ၀ယ်ထားပြီးပြီ။
နန်းညီရေ…. ဘာလို့ဆော်သလဲမသိဘူးဂျ။ အပေါ်က စင်ဒန်လားကွန်မင့်မှာ ပြောသလိုဆိုရင်တော့ ဘိုကေလေးတွေလာပါပေါ့ ခုံဖိနပ်နဲ့ဆော် ဖြစ်ရမှာ။ အဲဒါက ယုတ္တိရှိသလိုဘဲ။ ကောင်မလေးတွေက ကောင်လေးတွေကို ကျီစားချင်တာဖြစ်မလားဘဲ။
ဘလော့ဂ်ရဲမှူး….. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျိုး။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သွားရင် ဘလော့ဂ်ရဲမှူး ကို မူပိုင်ခွင့် ဌာနမှာ အလုပ်ခန့်မှ ဖြစ်မယ်။း-) အသိအမှတ်ပြုပါတယ်ဗျိုး။
ကိုကြီး ပေါ ရေ ညီမတို့ကတော့ ဒီလိုဆိုကြတာ “ မိုးတွေလေတွေ လာပါပေါ့၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်...
ဘိုကေလေးတွေ လာပြန်တော့.....ခုံဖိနပ်နဲ့ဆော်” လို့။ မိုးရွာရင် ခုန်ပေါက်အော်ခဲ့ကြတာ။
အင်း ဒီမိုး ဒီလေတွေကိုတော့ဖြင့် ကြောက်လှတယ်။
မဇနိရေ.... ဘိုကေလေးတွေ လာပြန်တော့က မူရင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ အပျိုလေးတွေဆိုတာက တယောက်ယောက် ဖျက်ဆိုလိုက်ရာကနေ တွင်သွားဟန်တူပါရဲ့။
ဒီကနေ့ ထပ်ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရကတော့ ဒီ စီးပွားပျက်ကပ်ဒဏ်ကို ကျနော်တို့ ကျောကော့အောင် ခံရဦးမယ့်ကိန်းရှိတယ်။
be careful of negative equity. ur hdb value might come down too.
Anonymous for Anonymous said...
To anonymous..if you can think of it with your "2 cents brain ", so do everybody. Don't worry. :D
မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး စာရေးချင် ဘလော့ ရေးချင်တဲ့ ကိုကြီးရေ
အလုပ်လုပ်စရာမလိုပဲ မနှစ် ၂၀ ကျွေးထားမယ်တဲ့
အရင်ကတည်းက ရန်သူမျိုး ၅ ပါး မက ဒဏ်ခံနေရတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကတော့ ထူးမခံရပါဘူး
မသေခင် ကပ်ကြီးများမှ အမြန်ဆုံး ကျော်လွှားနိုင်ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား။
အနှစ် ၂၀ (သို့) အနှစ် ၆၅